यस्तो छ चुनावको ‘अंकगणित’ | Ratopati
यस्तो छ चुनावको ‘अंकगणित’
आज वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजे सम्म मतदाताले जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान गरिरहेका छन् ।
देशका ७७ जिल्लाका १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रहरूमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले निर्विरोध भएका ३ सय ९० सहित ३५ हजार २ सय २१ पदमा प्रतिनिधि छनौटका लागि मतदान गर्दैछन् ।
७७ जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमध्ये पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार ३ सय १३ जना र महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६ सय ९८ जना रहेका छन् ।
यो सङ्ख्याबाट जम्मा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । साथै हालसम्म ३ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ ।
यो निर्वाचनका लागि योग्य मतदाता सङ्ख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० जना रहेका छन्, महिला मतदाता सङ्ख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० तथा अन्य मतदाता १ सय ८३ जना रहेका छन् ।
३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै
यो स्थानीय तह निर्वाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । जसमध्ये नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष गरेर ७ सय ५३ जना, नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष गरेर ७ सय ५३ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
यस्तै नगरपालिका तथा गाउँपलिकामा रहेका वडाहरूका लागि ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षहरू निर्वाचित हुनेछन् । महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४३ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४३ जना र खुला वडा सदस्य १३ हजार ४ सय ८६ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
प्रदेश अनुसार स्थानीय तह, मतदान केन्द्र र मतदाताको अवस्था यस्तो छ :
मधेस प्रदेश :
बागमती प्रदेश :
यो प्रदेशमा एउटा पनि महानगरपालिका रहेको छैन । ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ पालिका र ९ सय ८३ वडा रहेका छन् ।
यो प्रदेशमा कूल मतदान स्थल १ हजार ६ सय २९ र ३ हजार ८ सय ३२ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
मतदान गराउन १ लाख बढी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी कति ?
निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लामा ७७ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६ सय ७६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ७ वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई चलायमान गराएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि देशभरका मतदान केन्द्रमा १ लाख ९ हजार ८८ जना कर्मचारी खटिएका छन् । यस्तै ६५ हजार ८ सय ६५ जना स्वयंसेवकहरू पनि खटिएका छन् ।
सुरक्षाकर्मी तर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी गरेर २ लाख ६० हजार हाराहारी सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि खटिएका छन् । उनीहरुले मतदान स्थल तथा मतगणना स्थललाई ३ घेरा बनाएर सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
२ करोड मतपत्र, पहिले भन्दा बाक्लो
आयोगले आज भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २ करोड मतपत्र छापेको थियो । यी मतपत्रहरू सम्पूर्ण मतदान स्थलमा पुगिसकेको छ । यो निर्वाचनका लागि प्रयोग भएको मतपत्र अघिल्लो चुनावका बेला भन्दा बाक्लो कागजमा छापिएको आयोगको भनाई छ । आयोगले मतपत्र सजिलै च्यात्न र चपाउन नमिल्ने खालको भएको दाबी समेत गरेको छ । यो चुनावको मतपत्र कस्तो रहेछ ? मतदान गर्न जाँदा पक्कै तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ।